မြန်မာ Archives - Myitter
မြန်မာပြည်ကို မဝင်တာလား၊ ဝင်တာမသိတာလား မေးစရာဖြစ်လာတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နောက်ဆုံးအခြေအနေ …..
March 15, 2020 Myitter 0
COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က အာဆီယံမှာ အဆင်းရဲဆုံး မြန်မာ၊ လာအိုနဲ့ အရှေ့တီမောတို့လို နိုင်ငံတွေကို မဝင်တာလား၊ ဝင်တာမသိတာလား မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ COVID-19 က ရောဂါရှိသူ ၁ ယောက်ကနေ အကြမ်းဖျင်း ၄ ယောက်ကို ကူးနှုန်း Rate ရှိပါတယ်။ မြန်မာဟာ သူများနဲ့မတူတာက လမ်းဘေးမှာဆေးအလွယ်တကူဝယ်ပြီး […]
“ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်”
March 14, 2020 Myitter 0
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အရင်းအမြစ်များ (သို့) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည် မနေ့ညက COVID-19 သတင်းတွေ အရမ်းဟော့လာတဲ့အချိန်မှာ မြို့ကြီးတွေမှာ လူတချို့ Panic Buy တွေ စလုပ်လာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀န်ကြီးဌာနကလဲ အချိန်နဲ့တပြေးညီ စာတွေထုတ်။ ပြည်သူတွေကလဲ စာတွေရေးပီး အချင်းချင်းထိန်းကြ ၀ိုင်းပြောကြတော့ […]
အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့် ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအမျိုးသမီး ဂေါက်သီးအားကစားမယ် ဖူးပွင့်ရတီခိုင် ပထမဆု ဆွတ်ခူးရရှိ
March 12, 2020 Myitter 0
အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့် ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးဂေါက်သီးအားကစားမယ် ဖူးပွင့်ရတီခိုင် ပထမဆု ဆွတ်ခူးရရှိ မတ် ၉ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့် River Landing Classic -2020 ဂေါက်သီး ရိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာအမျိုးသမီး ဂေါက်သီးအားကစားမယ် ဖူးပွင့်ရတီခိုင် ပထမဆု […]
တစ်ရွာလုံး မိုးတွေကြီးပြီး ရေနစ်မြုပ်နေတာတောင် ဆွမ်းလောင်းမပျက်တဲ့ ရွာ
March 11, 2020 Myitter 0
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချို့သောနေရာဒေသတွေ မိုးတွေရေတွေကြီးပြီး ဒုက္ခတွေ့နေကြရပါတယ်။ ဒီလိုဒုက္ခတွေ့နေရတဲ့သူတွေကို လှူနေတန်းနေသူတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ဖူးကြမှာပါနော်။ ခုဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မှ တိုင်းလျှန်တို့ရွာ ( သို့မဟုတ် ) တာလောကြီးရွာ မှာလည်း မိုးတွင်းဖြစ်တာကြောင့် ရေကြီးမှုဒဏ်ကို တွေ့ကြုံခံစားနေရရှာပါတယ်။ မြန်မာဆိုတဲ့သွေးပါလာပြီဆိုရင် လှူချင်တန်းချင်တဲ့ သဒ္ဒါတရားကတော့ နည်းသည်ဖြစ်စေ များသည်ဖြစ်စေ ပါနေစမြဲပါပဲနော်။ […]
မြန်မာ လူမျိုးတွေ အမှန်တကယ် ကြောက်ရမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး
ဘာကြောင့် ကြောက်ရ မလဲ.. ဒီမနက် မှာ… အီတလီက….တစ်နိုင်ငံလုံး Lock down လုပ်ချလိုက်ပါပြီ အနီးစပ်ဆုံး…အိန္ဒိယ က.. မြန်မာ နယ်စပ် ကို ဆွဲပိတ်လိုက်တဲ့.. သတင်းတွေလည်း တက်လာနေပါတယ်… ကျနော်တို့ကတော့…သက်ြန်ပွဲ ကျင်းပဖို့ တာဆူ နေတုန်းပါပဲ…. ဒီနေရာမှာ…. လူငယ်တွေကို အပြစ်တင်တာထက်… ကျနော်တို့ […]
မြန်မာကို ရောဂါမရောက်ကြောင်း ရှင်းပြနေတာထက် ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ အချိန်ရောက်ပါပြီ ….
March 7, 2020 Myitter 0
လူတိုင်းကျနော့်ကိုမေးကြတဲ့ကိစ္စပါ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၀၀ လောက်မှာ လူဦးရေ တစ်သိန်းကျော်မှာ တွေ့ပြီး တရုတ်နဲ့ နယ်စပ်အရှည်ကြီး ထိစပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁ ယောက်တောင် မတွေ့ဘူးဆိုတော့ မေးစရာပါပဲ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ အချိန်မရွေး ထတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ ရှိလို့ ငါတို့ကံကောင်းတယ်” ဆိုတာထက် “ငါတို့ကံကောင်းဖို့” အစွမ်းကုန် အသင့်ပြင်စေချင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က […]
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသည့် လူနာတွေ့ရှိပြီဟု ထုတ်ပြန်သတိပေးသည်နှင့် မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲကို ချက်ချင်းပိတ်သိမ်းမည်ဟု ပြော
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသည့် ဝေဒနာသည်တစ်ဦးတွေ့ရှိရပါပြီဟု ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သတိပေးလျှင်ပေးချင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူး (စကု)မြို့နယ်အတွင်း ကျင်းပလျက်ရှိသည့် မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲကို ချက်ချင်းပိတ်သိမ်းမည်ဟု တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုက The Daily Eleven သတင်းစာသို့ ပြော ကြားသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့တွင် ကျောင်းတက်ခဲ့သည့် ကျောင်းသူနှစ်ဦးအပါအဝင် […]
COVID-19 ရောဂါကို ခုခံနိုင်သည်ဆိုသော သတင်းမှားများကို ယုံပြီး မပေါ့ကြရန် ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးပြော
March 6, 2020 Myitter 0
မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိနေသည်ဟု ပြည်သူတချို့ ယုံကြည်နေကြရာ သတင်းအမှား များကို မယုံကြည်ကြရန်အပြင် လူမှုကွန်ယက်တွင် မျှဝေခြင်း မပြုကြရန်နှင့် မပေါ့ဆကြရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ပြောသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက မတ်လ ၆ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ Chatrium Hotel ၌ […]
မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဒီလိုတွေတောင် ဖြစ်နေကြပြီလား (ဘုရားပေါ်တောင် မရှောင်)
မြန်မာလို့တောင် ခေါ်လို့ ရပါတော့မလားဗျာ။ ဒီလောက်ထိ ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက်နဲ့ ဘုရားရှေ့မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ၊ ဘုရားက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်း ဒါမျိုးကို တားမြစ်သင့်ပါတယ်။ လူကြီးသူမတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတွေ လာနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဒီလို ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး ဒီလို ပို့စ်မျိုးပေးတယ်ဆိုတာ အရမ်းရုပ်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ ရေကူးကန်ပါတီတို့၊ ကလပ်တို့မှာ ဝတ်တာ […]
ဆေးရုံအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ PPE ဝတ်စုံ ၁၀၀ ကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
မြန်မာအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကို ဂရုတစိုက် ကြပ်မတ်ထိန်းချုပ်ကြဖို့ WHO တိုက်တွန်းနေပြီ
အထည်ချုပ် စက်ရုံများ အတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသည့် ကုန်ကြမ်းများ တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်း ….
မြန်မာ့ တိုင်းရင်းဆေး ပညာအရ အဆုတ်ရောဂါဖြစ်လျှင် …..
နာမည်ကြီး ထိုင်း ရုပ်ရှင် မင်းသား မက်ထယူးဒင် တို့ဇနီးမောင်နှံ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံရ